Sendikan’ny tantsambo: haroso ny lalàna momba ny asa an-dranomasina | NewsMada
Nanao kongresy ny Sygma*, ny 16 sy 17 avrily teo, hanatsarana ny asan’ny tantsambo malagasy eto an-toerana sy any ivelany. Nofidina tamin’izany koa ny mpikambana ao amin’ny birao vaovaon’ny Sygma mitantana mandritra ny efatra taona.
Nandray anjara nanampy ny Sygma tamin’io kongresy io ny APMF* sy ny minisiteran’ny Fitaterana ho fanatanterahana ny laminasa hatramin’ny 2021. Notsongaina manokana ny fehezan-dalàna momba ny fitaterana an-dranomasina, ny fampiharana ny didy efa tapaka tamin’ny 2006 sy ny fanomezana fanamarinana maha tantsambo (PIM)*. Nambaran’ireo mpivory fa haroso eo anivon’ny fahefana mpanatanteraka ireo, indrindra ny fehezan-dalàna momba ny fitaterana an-dranomasina sy ny PIM.
« Manana ny fahaiza-manao rehetra momba ny asa an-dranomasina ny Malagasy, na eto an-toerana na eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena », hoy ny mpivory. Amin’izao aloha, tsy misy sambo lehibe mpitatitra eto Magasikara, na izany aza, tsy misy tokony ho antony sakana ho an’ny Malagasy, saingy mila homena vahana izay fidirana asa an-dranomasina izay. Noho izany, mitaky fahaiza-manao hatrany koa mila hatevenina ny fiofanana.
Izay fiofanana izay, mahakasika ny lafiny iraisam-pirenena, eo amin’ny teknika momba ny sambo, indrindra amin’izao vanim-potoana izao, ny fahaizana mifehy ny teny iraisam-pirenena izay tena ilaina tokoa raha hiasa an-dranomasina.
Karama, fahasalamana …
Niara-nivory tamin’ny Sygma ny solontenan’ny ITF*, mpiara-miombon’antoka amin’ny Sygma, hisorohana ny olana nisy teo aloha. Vonona hatrany koa ny APMF hifanakalo hevitra hanatsarana hatrany ny asa an-dranomasina. Maro rahateo ny olana mila vahana hanatsarana ny asan’ny tantsambo malagasy.
Nosy isika ka mila fanarenana ny tontolon’ny ranomasina, toy ny famelomana indray ny fitaterana, fananana sambo lehibe mpitatitra, an’ny fanjakana na sehatra tsy miankina. Antony iray mahalafo ny vidin-javatra avy any ivelany, izay tsy fananantsika sambo mpitatitra izay.
Sygma*: Syndicat général maritime
APMF* : Agence portuaire maritime et fluviale
PIM* : Pièces d’identité maritime
ITF* : International Transport Forum